Akunakubekwa phansi umthelela we-Amazon ekuthengiseni naku-ecommerce. Ukungasho okonakele okwenzeka embonini yezitolo ngenxa yobhadane kanye nesinqumo esalandela sokuvala iningi labathengisi abancane. Namuhla, ngaphezu kwamaphesenti angama-60 abathengi aqala ukusesha kwabo ku-inthanethi e-Amazon. Imali engenayo ye-Amazon evela kubathengisi bayo ezimakethe inyuke ngamaphesenti angaphezu kwama-50 ngo-2020 uma kuqhathaniswa nonyaka owedlule. 2021 Uyoletha
NgoLwesibili, ngo-Mashi 16, i-2021 NgoMsombuluko, Ephreli 26, 2021 Douglas Karr
Amathimba wokumaketha asebenza kahle asebenzisa ama-personas womthengi, aqonde ohambweni lokuthenga, futhi aqaphe eduze imingcele yabo yokuthengisa. Ngisiza ukufaka isifundo sokuqeqeshwa emikhankasweni yezentengiso yedijithali nakubantu benkampani nenkampani yamazwe njengamanje futhi othile ucele ukucaciseleka kulaba abathathu ngakho ngibona kufanelekile ukuxoxa ngakho. Ukukhomba Ubani: Umuntu Womthengi Ngisanda kubhala ngama-personas womthengi nokuthi abaluleke kangakanani emizamweni yakho yokumaketha yedijithali. Basiza ingxenye futhi bakhombe eyakho